UMnu Isenzo sikaSmith kunye nobutshabalalo ngokukhawuleza xa ejongene 'neengcinga ezahlukeneyo': uMartin Vrijland
UMnu Isithandwa sikaSmith kunye nobutshabalalo ngokukhawuleza xa bejongene 'neengcinga ezahlukeneyo'
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	2 Meyi 2017	• 44 Comments
Ngubani okhumbula iziganeko ezivela kwi-trilogy movie 'The Matrix' esuka kwi-1999 apho nabani na abadlulayo bangashintsha ngokukhawuleza ibe 'igosa'? Ukususela mhla ndiqalise ukubhala, umkhankaso omkhulu uye waqalisa ukungenza umnyama. Oku kubonakalisa kumaphepha onke amanqatha angasisiseko malunga nam kwaye wonke umntu obona ikhasi lam le-Facebook uhambelana ngokukhawuleza kunye nekhonkco kulo mkhandi. Oko kufuneka kuphephe kwaye ngokucacileyo kuyakwenza. Abantu abafuni ukuhlala kwiqela elilandela "i-crazy conspiracy thinker". Le nkcazo yenzeke ngendlela ehlelekile kwaye ibe nefuthe kwaye ibonakala iyenzeka ngendlela edibeneyo ngoncedo lwabasebenzi baseburhulumenteni (ubungqina bokuba sele bunikezelwe apha kwisiza). Esi siphumo sokuphazamisa sikhumbuza 'ukuhlolwa kweesilwanyana ezinhlanu' apho iqela leenkawu lijezisa enye inkawu ngokukhawuleza ukuba ufuna ukunyuka kwinqanaba apho ibhanana ikhona khona. Indlela yokuziphatha yeqela iqulunqwe emva kokuphindaphinda kwamanzi ebanda kwiqela elenza ukukhwela kwinqanaba (jonga apha yonke inkcazo yovavanyo). Injongo yezi zihlaselo zimbini; Ngakolunye uhlangothi, bekufanele uyeke ukuba ndiqhubeke ndibhala, ngenxa yempembelelo yokuzihlukanisa; Ngakolunye uhlangothi kubonisa abanye ukuba akufanele bakhwele lelo nqanaba. Le mishini iye yahluleka kude. Ndiyaqhubeka. Ukukhupha iibhola, ubizwa ngokuba yi-movie i-Matrix.
Ii-Agent kwi-movie I-Matrix iyakwazi ukukhupha nanini na. Wonke umntu ubonakala ekwazi ukutshintsha ngokukhawuleza ukuba abe ngummeli kanye nomlingisi omkhulu uNoo ubonisa kwi-matrix. Mhlawumbi uyazi ukuba; ukuba uthetha ngendawo ethile ngosuku lokuzalwa okanye emsebenzini malunga nezihloko ezichaphazela umfanekiso weqiniso wabantu. Ngokuzenzekelayo abantu bathathe ubutshaba elikhulu, ngenxa yokuba sijongene ngeembono ezivuselela nombono wabo ehlabathini. UMorpheus, omnye udidi oluphambili kwifilimu, uchaza kwividiyo engezantsi indlela oku kwenzeka ngayo. Logama nje abantu musa ukubona ukuba siphila kubunyani nolulahlekisayo, wakhela eli lomhleli (njengoko iziqu kwi imibutho elite imfihlelo), bathe abathile elite kwaye zikhuselwe ngu nabani na kodwa uyayiqonda inkqubo kwaye ngoko ngokwayo nomgcini kwenkqubo kuya kutshintshwa ngokukhawuleza xa ususa iprogram; xa nje beza kuguqulwa ngokukhawuleza kwaye baqondise ikhosi ukuya kuwe. (funda ngaphezulu ngaphantsi kwevidiyo)
Iifilimu zokulandelelana ezivela kwi-Matrix trilogy ekugqibeleni zikhokelela kwintlobo yobuninzi phakathi kwenkqubo yomakhi omkhulu kunye nabantu abavusayo; apho ilungelo lokuba khona kwenkqubo, njengoko kunjalo, liqiniswe ngumjikelezo ongapheliyo we-Neo ukulwa nokuqonda inkqubo. Yiyo ke into enqwenela ngayo abantu base-transhumanist kunye nebala elisebenza ngamandla. Imiphefumlo evusiweyo kufuneka ekugqibeleni ihambelane nobukho beMatrix kwaye ujabulele iimilinganiselo ezingapheliyo ezinokuvela. Enyanisweni, ifilimu yayiyifilimu ebonisa intetho, eninzi inyaniso, kodwa ijoliswe ekubumbeni apho siva abantu abafana ne-Google foreman uRay Kurzweil noMichio Kaku baxoxa ngayo (bona apha).
Ngoko ke kunzima ukukhuthaza abantu ukuba baphakamise kwinkqubo. Kodwa yintoni na loo nkqubo? Yintoni i-matrix? Ukuze ukwazi ukuqonda oku, kuyakunceda ukuba uqaphele iingcamango zabantu abafana noRay Kurzweil, uMikhio Kaku, uElon Musk nabanye abavangeli kunye nabo baqhuba i-transhumanism. Bacinga ukuba i-2045 sinakho ukwenza i-avatars ye-nanotechnology (ikopi) yomzimba wethu, apho singakwazi ukuyilayisha khona. Oku kuboniswa ngendlela enomdla kwaye ilandelelanise kwifilimu yokuTshintshela. Kwakhona bacinga ukuba siyijithali Nyaniso eyongeziweyo ukudala iihlabathi ezibonakala zinyani ebomini kunye nalapho singaphila khona ukuba sihlala khona. Cinga ngomdlalo apho unemeko yeengqungquthela zeglasi kunye nalapho uzichaza ngokupheleleyo ngalo mdlalo. Kodwa ngendlela yokuba nengqiqo nangoku uvaleleke ubuchopho bethu, njengoko baye ukuhlanganisa kunye 'ilifu', ngoko ke akusekho umahluko phakathi umzimba wethu, umhlaba wethu, yonke yethu yonke wadala ngedijithali. Lona akusiyo i-theory yoqhinga; yiloo nto aba bafana abhengezayo. Nceda ukhangele i-YouTube ngokukhangela igama elibiziweyo ngokudibanisa negama elithi "ubuncwane".
Njengobungangamsha, ngubani na ongathiwa ngabantu abaphumelelayo bezoshishino (funda apha ngaphezulu), sikholelwa ukuba siyakwazi ukulayisha ukuqonda kwethu kwihlabathi lehlabathi kwaye, njengokuba kunjalo, ukudibanisa 'efwini', unokuzibuza ukuba akunjalo le nto ngoku. Oko kukukhumbuza i-movie i-Matrix. Cinga ukuba ingaba kwenzeka ukuba inyaniso ohlala kuyo kungenzeka isele yinto eyiyo. Gcina ingqalelo kwiindalo zokudala zeenkonzo ezahlukeneyo. Ngaba ngaba Oku mhlawumbi ibhuloho kakhulu kuninzi. UDkt UGeorge Smoot wanikela ngenjongo ebonakalayo yobungqina be-TED engezantsi. Thatha isikhashana ukujonga. Akukho nto, inzululwazi kunye nabantu abaxhamlayo baxakeke kakhulu kulo mbandela. (funda ngaphezulu ngaphantsi kwevidiyo)
Emva koko siza kumbuzo ocinga ukuba ingaba kungenzeka ukuba ukuqonda kwethu kusele kubanjwe kwinkqubo. Khawucinge ukuba iGoogle iyakwazi ukwenza ezi zinto zedijithali ezipapashwa nguRay Kurzweil kwaye unquma ukulayisha ulwazi lwakho kwinto enjalo. Ngubani na olawula amava akho okwenene? Yiyo impela umphathi 'wefu'; umlawuli we-Artificial Intelligence simulation; umlawuli oye walayisha ukuqonda kwakho; Google. Ingaba ngaba le nto isetyenziswa kakade? Oku kunokuba yinto ephazamisayo kunye nefuthe ecacileyo emehlweni abo abaninzi. Kodwa xa ucinga nje emva movie Matrix kwaye athathe ingqalelo ukuba Hollywood na ezandleni iklasi ebakumgangatho ukuba ukwabelana uluvo lokuba scifi na umfanekiso woyilo nawe lo gama besonwabela ibhiya kunye ingxowa weminoti zebhiya uhlutha, ungathatha ingxaki ukumba ngaphezulu.
Kwinqaku amaninzi le website ichaza indlela inyaniso esiphila kuyo ifana kakhulu entolongweni; ezifana neGoogle inokubamba iqela lethu kwixesha elizayo ukuba sinquma ukuyilayisha kwi-digital universes (ubukhulu) obwenziwe ngu-Kurzweil & co. Nceda uthathe ingxaki yokufunda loo manqaku phantsi kwezinto zemenyumatrix','ngaphaya komthamo'kunye nezinye iindidi. Kakade ukuze uqhubeke nje ukukholelwa ukuba akukho nkqubo kwaye ukuba uMartin Vrijland wayefuna omemezela amabali neengcinga ezimnandi. Andikwazi ukukugxeka ngenxa yoko. Kwakhona kufumaneka kakhulu xa kungekho nto ingqiqo yokwazi ukuba olu qaliso luqala. I ukubona okanye evuka qho iqala ukubona ngokusebenzisa ubuxoki kumajelo eendaba kunye nezinto ezifana ukuguqula zembali kwaye kungakhokelela ukufunyanwa ukuba udidi elite wenza esinguSaturn-unqulo. Emva koko mhlawumbi ukufumanisa ukuba iSaturn ingaba yinto engundoqo yekronos yale ntolongo yomlilo. Oku kutyhilwa yi-Hollywood ncinane kwi-movie ye-Interstellar esuka kwi-2014. Akusiyo into yokuba le filimu izuze amaxabiso e-6 'Iimbasa zeSaturn"(ungayithobeli igama) kwi-2015. Ngaba uvuselelwe ukucinga?
Uludwe lwekhonkco lovimba: vari.com
Kutheni ihlabathi liye latshintshela ejele elivulekileyo kwiminyaka embalwa
I-intanethi ye-5G kulo lonke elaseNetherlands isipho okanye intolongo yakho yedijithali?
I-Facebook izakusebenzisa ingqiqo yolwazi ukuvavanya oko unokufunda
tags: eziziimbalasane, uphando, UMartin Vrijland, UMnu Smith effect, ray kurzweil, ubuninzi, IMatrix, i-trilogy
Averroes wabhala wathi:
2 Meyi 2017 kwi-23: 22
Ngaloo ndlela i-EU iba yindawo yoluntu yokhuseleko apho umntu angaphantsi kwelizwe. Ukwahlula kwi-ajenda ye-transhumanist kunye nejele le-digital (ukhuseleko lomnatha), oluya kunika uluntu ukugqitywa kokugqibela kunye nentlawulo yamahhala.
"Ukuba ufuna umbono wesikhathi esizayo, cinga isikebhe esithintela ubuso bomntu-ngonaphakade."
Amazwe aseMongeni kufuneka aphakanyiswe ngokwe-EU Politburo:
Isicwangciso seKalgigi sandiswa ngokubanzi ukuze ulwazisi lomntu lulahleke, ukuze umntu azinikele ngokulula kwilizwe.
Ukwahlula ngokupheleleyo kunye nokulawula ngaphakathi kwe-EUSSR usebenzisa iinkampani zangaphambili ezifana ne-Facebook / Google njl.
I-Austria ifuna iinkonzo zedijithali njenge-Alphabet Inc. ze-Google okanye i-Facebook Inc. ukuhlawula irhafu yokuthengiselana kunye nabasebenzisi be-intanethi yesizwe, ukuzama ukufakela kwinkqubo yerhafu esekelwe i-brick-and-mortar business.
Le nxalenye nenxa isicwangciso sijongise imifuziselo nomsebenzi Twitter Inc., Google okanye Facebook: I nte siyavumelana phantsi Zingaphi abalandeli ukucinga, ukuthanda, ukuposa kunye tweeting kuhlala free logama nje abasebenzisi ukuba iinkampani ondle kwedatha ibe ubuchule ukunceda izibhengezo zenzelwa ezinokuba zijoliswe kubathengi abaninzi.
ISIGABA SIKHULULEKILE ...
Ubume be-elektroniki eYurophu:
Iingxaki zomthetho kunye neemeko zexesha elizayo (e-ID 2020)
2 Meyi 2017 kwi-23: 41
UKUTSHINTSHA IZIMPILO ZEMPILO NEMIGAQO.
INKQUBO YENKQUBO YENKQUBO
Inkqubo yeNkxaso yeNkqubo ye-ICT (ICT PSP)
Ii-ID ze-tronic (i-EIDs)
Iprojekthi epheleleyo yeProjekthi: I-Identity ekhuselekileyo kwi-Borders LinkedI
EID Ukusebenzisana kwi-PEGS
Iinkcukacha eziqhelekileyo ze-EID
2 Meyi 2017 kwi-23: 43
2 Meyi 2017 kwi-23: 47
INGABE UVOTED HERE?
2 Meyi 2017 kwi-23: 52
SIYAZI ukuba IZIKOLO ZAMASEBENZI EZIKHULU ... IINKCUKACHA KWEMITHETHO YOMISHUMO WASE-EU kunye ne-GOOGLE / IPALANTIR (CIA / NSA / DIA njl.)
Ezi nyikima kwiGroningen ... kukho i-ajenda emva koko kunokucaca:
2 Meyi 2017 kwi-23: 54
Zikulungele ukuhlamba izandla kwi-NSA (SkyNet) ...
CuriousOne wabhala wathi:
4 Meyi 2017 kwi-14: 31
Ehlekisayo ukuba uthetha nge-SkyNet, eBelgium kukho umnikezeli we-intanethi obizwa nge-Skynet. Ebizwa emva komnatha kwi-Terminator yefilimu
Ukuba sijonga movie terminator (5) Genisys ubona ukuba ubalisa ibali wakwaSkynet wadalwa ukungena kunye nefomu 1 yoluntu lonke ukwenza uhlanga olunamandla engafiyo. Ngaba akunjalo oko iGoogle efuna ukuyenza ngokumelene ne2029 / 2045?
"Inkqubo yokufezekisa ukungafi iya kuqala nge-2029 xa i-nano-bots zenziwe zingasasazeka ngemizimba yethu ukulwa nezifo"
Ngaba asikho into esiyibonayo kwi-Terminator yefilimu, umzimba womntu oboshwe neenan particles?
4 Meyi 2017 kwi-14: 34
Ukhohliwe ukubika umthombo:
4 Meyi 2017 kwi-16: 01
@CuriousOne, Yonke imilayezo ye-NLP / subliminal esiyibonayo kwaye i-Hollywood iyinxalenye yaloo nto. Ifilimu enhle malunga nale miyalezo ithi 'Bahlala' kwi-1988. Uninzi lwabantu luye lwalungiswa amashumi eminyaka ukuze kuphunyezwe le ajenda ekhohlisayo ye-transhumanism ukuze bayeke emsebenzini xa ixesha lifika.
Isizukulwane se-YZ sisilungile njengoko senziwe okanye. balahlekile kwaye baya kuhlulwa yile nkohliso:
- Y = Uveliso Y ngumzukeli kwisizukulwana X kwaye ichazwa ngokubanzi usebenzisa ixesha le-1982-2001.
- Z = Ekugqibeleni isizukulwana Z; nabani na ozelwe phakathi kweminyaka ye-1992 kude kube namhlanje kubalwa phakathi kwesi sizukulwana.
I-ajenda ye-Google (i-DARPA) ihamba ngokufana ne-United Nations Agenda 2030. Sonke bahlaselwa ukususela Diaries 21 (Club of Rome) kunye nemibandela efana nozinzo, ukutshintsha kwemozulu, njl nto leyo ngaphezu kuhlaselwa CO2 nto leyo zimbiwa kubalulekile ngokwendalo kwaye ukuxhulumana kwakhona kwi ekunciphiseni labantu (bona ntetho IBill Bill malunga nokugonywa)
USkynet nguye (umyinge / D-Wave) database NSA kunye kwisakhiwo mveliso zomkhosi (DARPA) kunye Genysis na iprojekthi leyo yaqala 2002 ngu 'United States iSebe lezoKhuselo wokwazisa Information Office "eli sebe kamva emva qhankqalazo (bona logo I-Office Awareness Office) ebizwa ngokuba yi-PRISM kunye ne-NSA yiphumo le projekthi. Ngokombono wam, konke oku kunokwakheka ngokoqobo kwaye kufaneka phantsi komhlaba. Jonga izimvo ezivela ku-Elon Musk malunga ne-DUMBs kule ngxoxo:
IDATHA BIG ilizwi magic ukuba kuzaliswa ezi zolwazi kunye isigqebelo kukuba uninzi lwabantu kule self ukwenza ngokuzithandela igalelo ngokusebenzisa iinkcukacha zabo on Facebook, Twitter, Google etc phakathi ukuya ku ukuthandana usebenzisa Palantir software njl Unokutsalathiswa ngokucacileyo ukuba izibophelelo zentlalo yomntu othile zithini. Uhlobo lwezoqoqosho, ngokuqinisekileyo, umxholo okhangayo, ngoko ugcina iintaka ezininzi kwi-one swoop. Torque njengoko ukungcatshwa EUSSR PSD2 kuthetha ukuba ukuseka amaqela esithathu abe namntwana ukufumana iinkcukacha ezibalulekileyo malunga ngabantu.
Ngamafutshane, umnatha unqanda kancane ...
4 Meyi 2017 kwi-16: 34
4 Meyi 2017 kwi-20: 52
Yaye yile ndlela iqala ngayo ... ngaba umntu ukhonza ngokulula?
4 Meyi 2017 kwi-21: 04
Xa ndibona ulwazi malunga neenkonzo zesebe kunye neziseko zangaphantsi komhlaba, ndihlala ndibona ulwazi malunga nemeko e-US, kodwa akufanele lilibale ukuba le nto ikhona eYurophu.
Ukuze uqhubeke ku uSkynet kwaye ukuguqukela facebook, na facebook luqalwe ikakhulu ukulawula abantu kodwa ukuba ukugcina iimvakalelo neengcinga kwidathabheyisi ngelo xesha xa kukhatshwa noSkynet nabo sele sele ebhalile isofthiwe efuna ukufanisa ubuntu bakho ukuze ubophe ngokukhawuleza kwaye banokulawula ngokukhawuleza umzimba wakho.
Ngoku banokulawula kuphela ukwenza kunye nokucinga nge-NLP kunye nemiyalezo engaphantsi kwaye emva koko ngu-Skynet malunga nomzimba.
Ukuqhawula ukuvela kule nto kuya kuba yinto engenakwenzeka ngenxa yokuba isofthiwe ibhalwe ngokufanelekileyo emzimbeni wakho kwaye ixesha elide udibene kuyo, ulwazi olungakumbi lwenkqubo luya kufumana kwaye luya kunzulu. Ngaphandle kokuba ungaziqhawula kude ne-matrix uze uphinde ulawule umzimba wakho.
Ekubeni ndimvuse ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokwayo, le nto sele kudlule iminyaka 1-2 phambi Ndaqonda okulungileyo nokubi kuba iinkcukacha kangaka / disinfo phezu umnatha YouTube ukuba ngamanye amaxesha imithi singabi sabona emahlathini kwaye Ndabona indlela ihlabathi isebenza ngayo kwaye andibukeli i-TV okanye i-movie. Ndandisoloko ndibukela ama-movie ngenxa yokuba babenomdla kwaye bahlolisisa xa ndibukele ngoku andikubonanga nto ngaphandle kwemiqondiso kunye nemiyalezo efihliweyo. Ngamanye amaxesha sime movie Bathendeleka naye yaye badlale / ndimamele ixesha elithile lokurekhoda 2-3 yaye mna ayisoloko nqa ihlabathi isebenza njani. Yaye yamangaliswa ukuba bangaphi abantu ababophelelwe kwiTV yabo kwintambama njengokungathi bangcwele kwaye bakholelwe yonke into echazwe ngayo kwaye iboniswe. I ityala Akukho namnye wakha kuba ndiye kuye ukuze ndikwazi kubanika icebiso okulungileyo Mna ngokwam ukuze babone indlela ingqamana yonke kunye, wathi ukhethe phakathi ipilisi ebomvu okanye oluhlaza.
4 Meyi 2017 kwi-22: 14
@CuriousOne, Ngokuphathelene nokulawulwa kwengqondo (ukuqonda) enye isele iqhube kakhulu xa ubheka ishishini ngaphakathi kwinkampani yezobugcisa (kuquka iDARPA). Kwaye ugxininisa kakhulu kwiindlela zobuchule (ii-ELF Wave). Njengoko uNikola Tesla wathi, yonke into ihamba ngokuphindaphindiweyo kunye nokugungqiswa, kungekhona into ayisebenzisayo 'asezantsi'.
Ngoku qwalasela ukuphuhliswa nokuphunyezwa kwe-4G / 5G kwaye ngoku ibizwa ngokuba yi-GRID ehlabathini, elwandle nasemoyeni. Ngamanye amazwi, akukho nto iphunyukileyo kwi-signal manipulation. ukungena. Kungokuba njengoko kuchazwe kwiphepha elingezantsi, endikucebisa kakhulu, ubuchopho abanalo i-firewall. Yonke into engenazi nto ingena kwi-unfiltered emva kokuqhutyelwa kwalabo abo i-cortexs ichaphazelekayo kumlinganiselo omkhulu okanye ongaphantsi kulandela ukulinganisa cq. ukuqiqa. Ukuba ulawula lo, uthumela umntu ngokude usebenzisa ixesha lokulungiswa. Ngaloo mongo, ndiyakuchaza umsebenzi kaMarvin Minsky (ukulophulwa kweengqondo) kunye noDkt. URobert Duncan (umkhweli)
Iimbono ze-US kwi "Wonder Weapons": Ukutshintshwa kweZakhono zoCwangciso lweCandelo loLwazi
Ziziphi ubuchwephesha eziye zafundwa yi-United States ezinokukwazi ukuphazamisa amandla okucwangciswa kwedatha yomzimba wabantu? I 7 Julayi 1997 umba US News and Report World wachaza eziliqela okanye nabo eyenzelwe, phakathi kwezinye izinto, ukuba nendlebe i insides zabantu, yobisa okanye nauseate kubo, wababeka ukuba balale, ukufudumeza kubo phezulu, okanye ayibhutyuze phantsi nge okubulala  Ubugcisa buquka ama-lasers aqhaqhaqhazelayo anokunyanzelisa abafundi ukuba bavale; ii-acoustic okanye i-sonic frequencies ezibangelwa iintlungu kunye ne-spasms; kunye nokutshitshiswa kwamaza anokwenkqonkqoza abantu okanye iindiza kwaye ezinokuxutywa kunye nepilisi okanye iikhemikhali. 
Ngokuguqulwa, ezi zicelo zeteknoloji zinokusetyenziswa ezininzi. izixhobo yiacoustic, umzekelo, kufuneka lungqanyaniswe ukusetyenziswa njengoko afohlela axis ive okanye amasimi ive ukuba, xa lusekiwe, nezinokubakhusela izibonelelo, kunceda ukhulula bathinjwa, udlame ulawulo, okanye iindlela ezicacileyo convoys. La maza, angangena kwizakhiwo, anikezele ngamathuba omkhosi kunye namagosa okuthotyelwa komthetho. izixhobo microwave, ngokuvuselela inkqubo peripheral luvo, uyakwazi shushu umzimba, baqhube sokuwa-like, okanye abangele zokuma. I-radiation ephantsi-ncinane ichaphazela iimpawu zogesi kunye nomkhuhlane. Ezinye iiprojekthi bafuna pa eyenza okanye umzila ezinokuthinteleka, okanye enokuchaphazela imiyalezo evela ngumonzakalo nxalenye yobuchopho, iqhuba ngaphezulu iintshukumo kwezihlunu ngokuzithandela. Urhulumente waseRashiya uye wathengwa malunga neekopi ze-100,000 ze "Abafelokazi abamnyama" inguqulo yazo. 
Nangona kunjalo, le mbono "yokuzibuza izixhobo" yaphikisana ngumntu omele aziqonde. UBrigadier General Larry Dodgen, uSekela Assistant kuNobhala lezoKhuselo for nkqubo kunye namagqiza, wabhala ileta eya kumhleli malunga "eziliqela ezingachanekanga" kwi US News and Report World inqaku ukuba "kakubi iSebe iimbono lezoKhuselo kaThixo."  Ibango eliyinqobo likaDodgen kukuba le magazini yayichaza kakubi ukusetyenziswa kwale teknoloji kunye nexabiso labo kwimikhosi. Ook ubulumko injongo US ukusebenza phantsi kwenkululeko nasiphi na isivumelwano samazwe Ngokuphathelele Isicelo, kwakunye nezicwangciso bayeke (okanye ubuncinane ngokutsha) nasiphi na isixhobo for zokumelana njani aziwa abalandeli ezininzi. Enye ishiywe ngoluvo, nangona kunjalo, ukuba uphando kulommandla lukhulu. Iqela elingakhange likhankanywe nguDodgen kukuba amanye amazwe okanye abadlali abangekho boburhulumente abanokuthi bangaboshwa yimimiselo efanayo. Kunzima ukucinga ngomntu onomnqweno omkhulu wokufumana izandla kwezobuchwepheshe. "I-Psycho-terrorism" ingaba yi-buzzword elandelayo.
ntetho okulungileyo ekupheleni umbuzo obalulekileyo kakhulu uHarald Kautz Vella (e 54: 40) kunye Creutzfeldt-uYakobi eksperimenti neemazi kunye nabantu e England ± 1997.
4 Meyi 2017 kwi-22: 22
Ingaba kukho naziphi na isiseko kule teknoloji? Ewe, i-Holosonic Research Labs kunye ne-American Technology Corporation, zombini zineenguqulelo zesandi esicacisiwe esingenakuvakala. I-DARPA ibonakala isebenza kwiprojekti yayo yonyani. Iingxelo ezithandekayo, Ikhasi leSicwangciso esisebenzisa iConnect Range Acoustic Device njengeGazethi yeLizwi likaThixo:
6 Meyi 2017 kwi-01: 55
kukho uvavanyo lwe-5G e-Groningen, eFriesland andifumananga nantoni ngekrele. Ngaphandle kokuba bangena kwingxaki apho:
"Isikhululo esikhulu sokongamela eNetherlands siseduze nelali laseFrime yaseBurum. Unxibelelwano lweSatellite lubekwe iliso ngoorhulumente waseDutch noMerika ngokusebenzisa izitya ezinkulu ze-satellite. Esi sikhululo sokongamela sibonakala simi ngendlela yokuqhubela phambili kweenethiwekhi ze-4G eNetherlands.
Isikhululo komhlaba satellite e Friesland Burum, apho Dutch AIVD (General Intelligence and Service Ukhuseleko) kunye Diss (Military Intelligence and Service Ukhuseleko) ziye maza kuma ukuba umntu omamele kunye zaseMelika, nokuphuhlisa uthungelwano 4G eNetherlands zibonakala kakhulu kwindlela abahleli bophando beTelecompe bafumene. "
Ngoko kubonakala kusengqiqweni ukuba ukuhlola kule ngxaki ukuze lossen..Friesland kunye Groningen ezifanele njengendawo yokulinga kolu hlobo nto, kuba nje kukho eninzi kwesingenato isithuba kwaye uxhulumaniso ngokwaneleyo kho ukwakha fiberglass .
Akuyiyo imfihlakalo enkulu? ???
11 Meyi 2017 kwi-19: 46
@ Averoes Ezi ngxaki e Friesland kuba ukwandisa 4G / womnatha 5G 3000 + MHz ezitsho. 4G ukuzifaka sele 800 / 1800 / 2600MHz frequency 5G ziya kufakwa kwi 700Mhz nako 2100 2600MHZ ukuba ndithe mna phutha. Inowuthi rhoqo ngokuqina umqondiso, kodwa data yendlela ephantsi, umqondiso asezantsi kunokuba ukugqobhoza kakhulu ezindlwini kwaye uye izinto engcono kunye nemiqobo. Ukuphakama kwexesha, ukubuthathaka komqondiso kodwa ukuhamba kwedatha yedatha.
Umzekelo with WiFi apho umzila uphakathi yendlu apho ngoku 2.4Ghz band kunye 5GHz band 2.4Ghz band nga phandle kodwa ezifunyenweyo kodwa iya kuba ubuninzi izinga data BV 150Mbs, ukuba buthathaka uphawu komnci ngokwemvelo kodwa kwangaxeshanye usafuna kwamkela, xa 5GHz band izinga data eliphezulu BV 300 MBS iya kuba kuphela ziya abaliqondayo elo uphawu ngaphandle kwekhaya.
nayo yonke kuxhomekeke apho umqondiso ethunyelwayo, ndiya kwazi ngantoni na ukuba afake ngakumbi iindawo ezintsha eriyali ziya ziba kufutshane ayikhuphi phezulu ukuba anikele ngokukhawuleza kwaye njengoko idatha. kwaye oku kuye kwanda ngezinga elikhawulezileyo kwiinyanga zakutshanje. Bobabini kwiindawo zoluntu nakwizindlu kwizakhiwo / iinkampani apho i-Wi-Fi 3g / 4g kunye ne-5g kufuneka ifumaneke.
5 Meyi 2017 kwi-22: 03
Inani elimnandi uDuncan, kodwa iidiliya eziqinileyo ????
Ngokwale nkcazelo ye-BBC ibhubhane le-BSE liye laphuphuma nge-1986:
5 Meyi 2017 kwi-22: 07
Oko kuzama kum kungathi nje kulungele njengengxube..Fryslan neGroningen ziindawo ezifanelekileyo
6 Meyi 2017 kwi-02: 03
Abalimi baseNetherlands, ngokukodwa ekumntla (empuma), abakhuthazwa ukuba bagcine iifama zabo ngesizathu, bona i-ajenda:
'Ngokuqinisekileyo abalimi be-1000 bayeza kumela'
Kwiinyanga ezizayo, i-1000 iya kugcina i-2000 abalimi bemveliso yobisi, ilindele uNobhala we-State Van Dam. Ucinga ukuba inani lamafama liya kusebenzisa ilungiselelo elitsha lokumisa, inxalenye yesivumelwano phakathi kwakhe kunye neefama zobisi ukuba iKomishoni yaseYurophu iye yavuma namhlanje
Imbopheleleko yokubambisa kwiindawo ezinokunciphisa ukuxhamla
IKhabhinethi ifuna ukuqinisa isikhundla esiphezulu sehlabathi esinoNetherlands enkonzweni yokunxibelelana kwentambo. Yingakho uMphathiswa wezeMicimbi yezezoQoqosho uza kutyundela uxanduva lokuxhaswa ngemali kwixesha elizayo lezithuba, umzekelo ukusuka kwi-5G. Umbopheleleko usebenza ngokukodwa kwiindawo ezihlala eNetherlands apho ukuxhunywa komnxeba kungakalungi okwaneleyo. UMphathiswa Kamp uye wabhengeza oku kwincwadi eya kwiNdlu yabameli. Ngaphambili kule nyanga, urhulumente wabhalela 'ukuhlala kunye nendawo yonke' ukufikelela kunxibelelwano olungenantambo njengesisiseko esisisiseko.
2 Meyi 2017 kwi-23: 58
UWilliam Binney (ex-NSA) uyachaza:
3 Meyi 2017 kwi-00: 25
Inkqubo yezopolitiko ebonakalayo ngokwezoqoqosho ngokweendlela zokuvelisa, ukuthutha kunye nokurhweba, kunye nokulungiswa kolawulo lwexabiso (oko kungengaphandle kweemarike). Ezopolitiko ngenxa yendima ehamba phambili yeqela lamaKhomanisi; kunye noluntu ngokulawulwa kwayo yonke imibutho yentlalo yilo liqela elifanayo.
3 Meyi 2017 kwi-14: 03
Ukulandela oku, qhathanisa amaxwebhu avela kwi-STORK (i-EU) kwaye izibonelelo zihambelana noko i-DARPA (= i-Google, phakathi kwabanye) iphuhlise ngeNkqubo Yolwazi Yonke Yolwazi / iGenesis:
Uchonga lwaBantu kumgama (HumanID)
Umzobo (ukusuka kwisayithi esemthethweni ye-IAO) echaza amandla o "Uchonga lwabantu Ngaphandle" iprojekthi 
I-Human Identification kwi iprojekthi Distance (HumanID) zikhuliswe automated ubugcisa nokuchongwa esingu ukubona, Nakana uze uchonge nabantu imigama ezinkulu "ukhuseleko amandla", uthintelo lolwaphulo-mthetho, yaye "zokhuseleko kwilizwe / ukuzithethelela" iinjongo. 
Iinjongo zayo ziquka iinkqubo zoku: 
Ukuphuhlisa i-algorithms yokufumana nokufumana izifundo ezivela kwi-150 metres (500 ft) kwibanga.
Ukuqaphela ubuso kunye nokuqatshelwa kwezinto kwi-24 / 7 kwinkqubo yomntu yolwazi.
Ukuphuhlisa nokubonisa inkqubo yokuchonga abantu eyenza i-150 metres (500 ft) isebenzisa umfanekiso obonakalayo.
Ukuphuhlisa inkqubo ye-radar ye-radar yamandla angaphantsi kwamandla omhlaba ommandla wokujonga ukujonga kunye nensimu emfutshane yendlela yokujonga i-gait classification.
Ukusebenza kwe-gait ukusuka kwividiyo ukuchongwa kwabantu ekude.
Ukuphuhlisa inkqubo yokuqaphela ubuso obunobuninzi obubonakalayo.
Ingqungquthela ??? Abantu ngoku banakekele igalelo le-Facebook, Google+, Twitter njl
3 Meyi 2017 kwi-14: 15
I-Google 'Sieg' Hire ngoku ichaneke ngokucacileyo kwividiyo engenhla:
Kumele ibe ngumhlobo we-LinkedIn umbulali; I-ATS kunye nenjini yokukhangela inxaxheba kwelinye. Abaqeshi bangakwazi - ngokubhekiselele kumahemuhemu - imisebenzi yokuthumela (njengokuba kuboniswe kweli phepha), ngelixa ulawula umrhumo ongenawo wabenzi bezicelo. I-Google Hire (ngokucacileyo) nayo idibaniswa neakhawunti zeGoogle. Oku kuya kunika ulwazi oluninzi malunga nabaqeshi nabaviwa.
I-PasOpSmoking ivimbela ubuchopho wabhala wathi:
3 Meyi 2017 kwi-06: 42
Ndisandul 'uvakatye kwi-barracuda yombuso, blogspot. Ixesha lokugqibela lalingama-2 kwiminyaka edlulileyo ngenxa yokuhlaselwa isicashulo xa sifunda 'uMnu Smith effect' amanqaku, ukuba ndibhale ngokuchanekileyo, ngokubhaliweyo ngumlawuli waseDutch uYeren Hogeweij, ilungu laseRotterdam
Iqela leMasonic 'iKafard d' okanye '(Golden Cockroach)
Kwimigqabantsha yakutshanje kwinqanaba le-barracuda umgca wee-agent ezichasayo ezichasayo ziyacaca:
Ummeli ochasayo u-Maud Oortwijn wacinga ukuba usekelwe
Kwabanye, uMikha Kut uya kuhamba, 'Iphoyisa elidala' kwaye kuthiwa ngumntu owayekade ehlala ekhaya uKohos Woudenveld kunye nebali lakhe lejogo malunga nenethiwekhi ye rolodex pedo.
Iipropati zokuchasana ezilawulayo uHans Mauritz kunye noWim Dankbaar kudlula,
Isikhundla sePizza kunye ne-shill 'seaman'.
Bonke abafunayo benyaniso besazi ixesha elide ukuba bonke aba bantu bangama-shill.
Kwaye ngoku kuyacaca ukuba yiyiphi imidlalo edlalwa ngayo.
Zizo zonke iikholeji zikaRhulumente zikaJeroen Hogerweij, enendima eyahlukileyo kodwa enenjongo efanayo.
Ukubonakalisa kunye neengqondo zeengcinga ezahlukeneyo '/ abafuna inyaniso.
3 Meyi 2017 kwi-07: 11
Ukubuyisela, okwakumelwe ukuba yi: Koos Woudenberg.
3 Meyi 2017 kwi-07: 33
Unokwazi ukujonga ibali ledayick kule spunk engcolileyo: "UKoos Woudenberg uthetha ngokudumbulula elwandle kwi-Sexbierum"
Ndixela le nto ngaphandle kwebhokisi elidala kwithemba lokuba abafuna inyaniso bahlakulele izakhono zokufunda ukuqaphela iingqondo zengozi eziyingozi.
Le iguqule esibi ngomlomo wakhe emuncu waziva kakhulu kakuhle ukuba enze ngoko ke akazange inqobo ngokuqhelekileyo kulawulwa yi-arhente eliphikisayo elinguMyra of "Thetha Myra'- nje udliwano-ndlebe koonomathotholo, kodwa ke wayefuna ukuba uthanda giant screen.
Beka ikhonkco / qhagamshela amachaphaza, kunye nezinye i-psychopath enkonzweni karhulumente njengoNico van der Ham, uMadi Oortwijn, uMichael Vittaliti, uMikha Kat.
Abaxhasi befuna inyaniso, baqaphele ngokwenene uNiko van der Ham, ubonakala elula, kodwa i-rat kwimigqa ye mouse.
3 Meyi 2017 kwi-07: 37
Indoda emva kweBracuda ("intatheli": funda i-AIVD-er) uJan Libbenga. Usebenza kunye kunye neklabhu kaJeroen Hoogeweij (ilungu le-Aleister Crowley ebuyisela ihlelo le RTD).
3 Meyi 2017 kwi-08: 17
USteve Brown (i-TV ye-Salto) akazwanga ngathi ikhofi entsha ... konke kugxininisa nase-Amsterdam
3 Meyi 2017 kwi-08: 20
Ngendlela, amava am (ukufunda) kwiBarracuda kukuba i-hardcore iSionists ayilona ngqalelo ebalulekileyo malunga nesimo esingekho mthethweni saSirayeli. Enyanisweni, banqula ukuba yintoni i-truthseeker iya kuqinisekisa nje ngokusola kwakhe
3 Meyi 2017 kwi-08: 36
Ngokuqinisekileyo kuyinyaniso. UZiva (omnye wabalobi abakhutheleyo kwiBracuda ehlobene ne-Swapichou blog) ukhona kumkhosi wakwaSirayeli kwaye uhlala eTel Aviv (obungqina buni). Zizo zonke ii-trolls zengcali eziqhuba ezi bhulogi.
3 Meyi 2017 kwi-08: 24
3 Meyi 2017 kwi-09: 59
Khangela kwakhona iinkokeli ezintsha zenkolo ezidibanisa iinxalenye zeqiniso kunye namabali amnandi malunga namaqela angaphakathi kunye kunye nokuxelela ukuba unokuzixhobisa apha emhlabeni. Umprofeti omtsha: uMartijn van Staveren. Yintoni eyayibiza loo ntetho? Yintoni ngobambana kukuba kwiqela ezilawulwa enye imidiya (Umhlaba Imiba, Guido Jonkers (WantToKnow.nl, njalo njalo) konke ukunika igadi nganye. Ewe, le nene uthetha isizalo. Kukho iindawo yenyaniso oko akuthethayo. Kulo mzekelo, sisebenzisana nomntu ovela (kwaye) ukuzalwa kwakhe interdimensional / wanxulumana komhlaba. ngaloo ndlela ke sele uyazi Kwathi olu lwazi mega ezintsonkothileyo malunga nemilinganiselo omkhulu entsonkothileyo nabantu interdimensional. ngoko ke ulwazi unikwa ukusuka entsha guru (yaye ngaloo ndlela entsonkothileyo kakhulu waza wenza bamakhazikhazi). enyanisweni yonke hocus pocus ngaphantsi kakhulu kuzisa guru omtsha. kube kuya kuba nebhongo kwakhona ukusebenza unqulo entsha kule meko kunye nabasebenzi ukukhanya. Alice Bailey. Ukumatanisa ne iSaturn intsimi, inkohliso? Qaphela iziganeko:
3 Meyi 2017 kwi-10: 30
Kusele kakhulu ... kakhulu kunzima ... ngoko kufuneka uzixhobisa ukuqinisekisa ukuba sibuyela kumvelaphi. Kwakhona uhlobo lokuguqulwa nokuzinikela njengoko siyazi kwiinkonzo. Wamkelekile kwihlabathi likaLucis Trust
3 Meyi 2017 kwi-10: 41
UMarcel Messing, indoda eyandibambene ngexesha leNdibano yeFrontier yokugqibela e-Amsterdam ukuze ndilumkise ukuba "ba" banokuthi banganditshitshisi nge-weapon. Indoda eyazama ukuvuselela ukwesaba. Indoda eyayibhalela uMikha Kat. Uphela nje kwiklabhu xa unomsebenzi oqhelisayo "utitshala ongeyindoda okanye owesifazana" (bona i-12: 03 min.) Yaye wena ungumphathi we-Alice Bailey. Sonke siyazi ukuba ngubani omele ukuba i-hermaphrodite yile: Baphomet. Wamkelekile kwihlabathi kunye nenkolo entsha yenkonzo yeSaturn.
3 Meyi 2017 kwi-10: 49
Marcel uMesiya wamkela igolide bajikeleze okufundela kunye prietpraat..Een zekofu eliqhelekileyo eyoyikisayo kakhulu guy encinane, kodwa ke kwakhona ke ngomnye 't yintoni nezibane club idibanisa ukusasaza ukukhanya lobuxoki (ungase uthi ubuxoki).
Kwaye kuluntu awukwazi ukwenza nantoni na, kuba iGroße Lüge ilawula:
3 Meyi 2017 kwi-11: 22
Ndabona kwakhona ukuba basebenzisa iindlela zokusebenzisana, apho badibanisa inyaniso kunye nobuxoki. Ngamanye amazwi bakubamba ngeenyaniso kunye neengqondo zokugcoba ngobuxoki ukuze ungaboni ihlathi ngokusebenzisa imithi uze uwele ngenxa yokukhohlisa kwabo 'abatsha.'
Siyakwamkelwa kwihlabathi elimangalisayo labatshayizi beNew Age. Ngendlela, iNew Age ifumana imvelaphi yayo kwi-Kabbalah / Zohar / Talmud.
3 Meyi 2017 kwi-11: 31
Ngokuchanekileyo: kakhulu kakhulu
kodwa uVan Staveren wehlela kum ngebhasikidi kunye nentetho yakhe ye-hypnosis kunye nokuthetha kwakhe "ongeyindoda nomfazi" ...
Yenza konke kube nzima kakhulu kwaye kuqondwa ukuba udibane nale mibutho ephezulu ukususela ebuntwaneni: ngoko ubeka isikhundla sakhe.
Akuzona zonke izinto ezinomdla kwaye zinzima njengoko akwenzayo. Kwaye ngokuqinisekileyo akufanele sibe ngabasebenzi bokukhanya. Akukho abakhethiweyo abafuna "ukuxhotyiswa."
3 Meyi 2017 kwi-19: 07
UMark Passio akaqinisekanga kwindlela yam. Ucacisa okuzekeliswayo Masonic apha ezakhayo yam kakhulu (ngokungathi kukho kwakhona umyalezo lemfundo) kwaye lweli Aleister Crowley (eyayizibiza ngokuba irhamncwa 666).
Ukuba uthetha ngelitye lekhonkco elimele lisuswe ekukhanyeni ngokusebenzisa umdali wokudityaniswa, ngoko "kukukhanya kukaLucifer" (umdali).
Le ndoda iphinda ifake inetyeko yokhuseleko emehlweni am.
4 Meyi 2017 kwi-17: 23
@Martin, kanye noPassio ungumgcini wesango kunye nomkhohlisi kodwa unolwazi oluninzi malunga neentlalo ezifanele ukuphulaphula.
Lo mfanekiso ndiwuthile kwi-intanethi kwaye ndinika umfanekiso omhle wemvelaphi yazo zonke iYurophu:
3 Meyi 2017 kwi-11: 33
Ubungqina obutsha obulungileyo kabbalah
3 Meyi 2017 kwi-13: 02
Andikwazi ukuyeka ukudweba i-cosmograms. Ndizama ukudweba into evela kwabanye abafundi. Ndicinga ukuba kumnandi kakhulu ukwenza, kwaye kubonisa ukuba ungqongqo ojulileyo ekuchazeni.
UHankeke, ndiyabonga kakhulu kule worksho enomdla kakhulu, ngenhlanhla imihla ye-2 iza.
Kunconywa kakhulu kunoma ubani ofuna ukunyathela kwi-astrology! "
Uya kucinga ukuba uncedwe ngephepha lemibala.
3 Meyi 2017 kwi-22: 46
Ufumanisa njani ukuba ukuxabisa kuzalisekisa indima ebalulekileyo kubaphuphi.
Ndikunye, ulwimi lwakhe lusele, ludoda olupheleleyo, luqili kodwa luyizihlunu, ngoko ke ungacacanga kodwa nje ngoNico van der Ham, uhlobo oluthile lwe-verader (i-clowns i-horlow suit)
Ukucaphula kwisiqwenga sakhe, khangela ikhonkco elingezantsi: "nokuba umama ondibathandayo ucinga ukuba mna .... I-blag yeyona nto, ha ha ha hawukwazi ukuyithatha ngokungathí sina xa ubhala phantsi kwinqanaba elibi kakhulu malunga nephutha likarhulumente (ubulungisa) kunye
3 Meyi 2017 kwi-13: 15
Ukuthetha 'kobutshaba', ndafumana inqaku elincamisayo elihambelana ne-adage: Inkinga-Ukuphendula-Isixazululo.
Ulutsha lwaseYurophu olungavumi-kodwa lukulungele ukujoyina ukuvukela
Abantu baseYurophu abaselula bayagula imeko yeYurophu. Kwaye bakulungele ukutshintsha, ngokutsho kwenkqubo yophando olutshanje.
Abaxhasi be-580,000 kumazwe akwa-35 babuzwa umbuzo: Ungathanda ukuthatha inxaxheba ekuvukeleni okukhulu kwisizukulwana samandla ukuba kwenzeka ntoni kwiintsuku okanye kwiinyanga ezilandelayo? Ingaphezulu kwesigamu okanye i-18- kwi-34-ubudala ubudala ithe yebo.
Ngokuthe ngqo ... iNetherlands (i-Orange = i-33) iphelela kwindawo ye-13e kunye nesabelo se-33%. Kubonakala ngathi iziphumo zonyulwa zeVVD? , idatha eyenziweyo? Kuya kulungelelanisa amanyathelo kwakhona.
28 Septemba 2019 kwi-17: 24
Umbungu uhamba ne-Interstellar ubekwe kufutshane neplanethi yeSaturn. Via ukuba umntu uya efaka omnye umnye ukuya kumnyele, apho kufunyenwe iplanethi apho ubomi bunokwenzeka.
Iprotagonist ibonakala ngathi ithumela imiyalezo kuye kwixesha elizayo kuye, ukuba imthumele kwi-NASA, apho kwenzeka ukuba baxakekile baqala uhambo lokuya kumbungu. Nangona kunjalo, i-wormhole ibonakala ngathi ikhona iminyaka ye-48. Kukho nomngxunya omnyama kufutshane nombungu, iGargantua. Imbonakalo yomntu ofakwe kwifilimu ijongeka njani njengefoto yokuqala yomngxunya omnyama obhengezwe ekuqaleni kwalo nyaka. Uhlobo lwenkqubo yokuxela kwangaphambili….
« U-Edith Schippers ngoku naye ufuna iphrofayili yakho yeDNA
U-Elon Musk usomashishini omkhulu okanye i-DARPA yebhodi ye-transhumane ye-cyborg? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.477.903
UMartin Vrijland op UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?
guppy op UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?
Riffian op Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu olunesiqingatha semitha kunye nokungeniswa kweapps
UHarry makhulu op UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?